Xinhua Myanmar - အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား ၂ ဦးသေဆုံး ၊ ၈ ဦးဒဏ်ရာရ
အမေရိကန်နိုင်ငံ လာစ်ဗီးဂတ်စ်မြို့ရှိ သေနတ်အရောင်းဆိုင်တစ်ခုတွင် ပစ္စတိုသေနတ်များ ပြသထားသည်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) North America
တစ်ဦးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ အခြားပစ်ခတ်မှုတစ်ခုတွင် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
ရဲအရာရှိတစ်ဦးမှာလည်း ကားတိုက်ခံရသဖြင့် ဒဏ်ရာများရရှိသွားကြောင်း ၊ သို့သော် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ဖွယ်မရှိကြောင်း သိရသည်။“ ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့မှာ သိပ်ကိုပရမ်းပတာဖြစ်နေတယ် ၊ ကမ်းခြေမှာ သိပ်ကို ဝရုန်းသုန်းကာ ဖြစ်တဲ့ ညတစ်ညပါပဲ ” “ ရာဇဝတ်မှုတွေက အများကြီးပဲပေါ့”ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ Paul Neudigate က ဆိုသည်။
ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ ၈ ဦးစလုံးကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး သေနတ်ဒဏ်ရာများကြောင့် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ဖွယ်ခြိမ်းခြောက်မှုရှိကြောင်း Fox News သတင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အခင်းဖြစ်မှုများကြောင့် လူများစွာကို ရဲအချုပ်ခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သတင်းက ဆိုသည်။
ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခင်းဖြစ်အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရရှိမှု အသေးစိတ်အခြေအနေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
2 killed, 8 injured in shootings in U.S. Virginia Beach
WASHINGTON, March 27 (Xinhua) -- Two people were killed and eight were injured in at least two shootings on Friday night on Virginia Beach's oceanfront in the eastern U.S. state of Virginia, authorities said Saturday.
One person was killed by police and the other,awoman, was killed inaseparate shooting, according toastatement from the Virginia Beach Police Department.
A police officer was also hit byacar with injuries that were not life-threatening.
"What you can see is we haveavery chaotic incident,avery chaotic night in the Beach," police Chief Paul Neudigate said, "Many different crime scenes."
The eight injured were all transported to hospitals with gunshot wounds ranging from serious to life-threatening,aFox News report said.
Several people were in police custody, being questioned by police, said the report.
Police did not offeramotive for the shootings or provide details on the conditions of those injured. Enditem
Photo taken on Oct. 4, 2017 shows firearms on sale inagun shop in Las Vegas, the United States. (Xinhua/Wang Ying)
Previous Article တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူ ၄ ဦးသေဆုံး
Next Article ဘိုင်ဒန်က ကော်လိုရာဒိုပစ်ခတ်မှုအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချ ၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုရန် လွှတ်တော်အားတိုက်တွန်း